Fitsapana klinika vaovao amin'ny marary voan'ny pnemonia COVID-19
Ny fitsarana dia natao hanangonana angon-drakitra fanampiny momba ny fiarovana amin'ny marary miaraka amin'i Auxora, hanombantombana ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny Auxora miaraka amin'ny tocilizumab sy corticosteroids, ary hanombantombana ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny telo versus enina andro amin'ny fatra. Ny Orinasa vao haingana dia nitatitra ny angon-drakitra ambony avy amin'ny fitsapana CARDEA Phase 2 izay manohana ny fandalinana fanampiny amin'ity mponina marary ity.
Ny CARDEA-Plus dia hampiditra mararin'ny pnemonia COVID-19 miaraka amin'ny tahan'ny PaO2/FiO2 (P/F) ≤200 izay mitaky kanola nasal (HFNC) na rivotra tsy mihetsika (NIV). Ny marary dia hahazo fatra Auxora 2.0 mg / kg voalohany arahin'ny 1.6 mg / kg amin'ny 24 ora, ary 1.6 mg / kg amin'ny 48 ora. Ireo marary manana P/F ratio ≤100 na amin'ny ventilation mekanika ao anatin'ny 48 ora dia azo alaina kisendrasendra handray na telo dosie Auxora na telo dosie plasebo. Ny marary rehetra dia hahazo fitsaboana mahazatra izay mety ahitana ny fampiasana corticosteroids sy / na tocilizumab.
"Na eo aza ny fitomboan'ny tahan'ny vaksiny ho an'ny COVID-19, ny isan'ny hopitaly sy ny fahafatesana dia mbola miteraka olana lehibe," hoy i Sudarshan Hebbar, MD, lehiben'ny mpitsabo ao amin'ny CalciMedica. "Na dia nanjary be mpampiasa aza ny tocilizumab tamin'ny marary nampidirina hopitaly miaraka amin'ny COVID-19, dia mbola ilaina ny fanatsarana ny valin'ny marary. Mino izahay fa ny Auxora dia manana fomba fiasa miavaka sy fananana pharmacokinetic izay mety hanome tombony ara-pahasalamana ho an'ireo marary manana pnemonia COVID-19 mitsikera. ”
"Ny fanombohana ity fandalinana ity, izay mamela ny fitantanana ny Auxora miaraka amin'ny tocilizumab sy corticosteroids amin'ny marary voan'ny pnemonia COVID-19, dia dingana lehibe ho an'ny orinasanay," hoy i Rachel Leheny, Ph.D., Tale Jeneralin'ny CalciMedica. . "Ny tena zava-dehibe, ny valin'ity fanadihadiana ity, izay arahin'ny fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny FDA, dia hampahafantatra ny famolavolana fitsapana klinika Phase 3 amin'ny faran'ity taona ity. Nahazo hafanam-po sy fanohanana lehibe avy amin'ny tranokalan'ny mpanadihady izahay amin'ity fandalinana ity ary manantena ny fisoratana anarana haingana. "
Fampiharana Fanafody Vaovao ho an'ny Fitsaboana Matsilo ny Migraine Company|
Previous Ahoana no hanakanana ny loza ateraky ny firotsahan'i Berlusconi any Italia
Manaraka Fanafody kamboty vaovao ho an'ny fitsaboana ny lymphoma follicular